MUUQAAL: Fariinta John Kerry ee imaanshihiisii maanta – Radio Muqdisho
MUUQAAL: Fariinta John Kerry ee imaanshihiisii maanta
Tarjumada hadalka John Kerry
Sharaf ayey ii tahay maanta inaan noqdo xoghayihii uga horreeyey Mareykanka oo booqasho ku yimaada Soomaaliya, waxan la kulmay hogaamiyeyaasha dawladiina iyo wakiilo ka socday urarada bulshada rayidka, waxan sidoo kale doonayaa inaan qaato fursadda ah inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaago hormarka nabadda ee soomaaliya ay ku tallaabsatay.
Labaatan sanno ka hor, dawladda mareykanka waxaa lagu qasbay in ay ka baxaan dalkina, hadda waan soo laabaneynaa anagoo la shaqeynayna beesha caalamka, waxaana jirta rajo weyn anagoo walaaca jira aan idinla wadaagno.
Waxan idin sheegayaa wixii ay diplomasiyiinta ay ii sheegayaan oo ah in Soomaaliya ay ka go’an tahay in ay hore u socoto soona ceshato haykalkeeda dawladnimo, iyadoo hiigsanaysa mustaqbal ifiya, meeshana ka saareyso agagixisada iyo maleshiyooyinka.
Waxaa la idin yiraahdaa dadka baahan, dad dagaal oo siyaabo badan isu dila, dagaal ku saleysan diin, cunto iyo dhibaato qoysaskiina dhexdooda ah.
Shalay Kenya, waxaan xerada qaxootiga Dhadhab kula hadlay qaxootiga Soomaalida oo dalkooda uga qaxay ineysan heysan wax difaaca, cabsi iyo dhibaatooyin kale, waxaan la kulmay Soomaali da’dooda u dhaxeysa 15, 18 iyo 20 sano, kuwaas oo ebed ka bixin xerada qaxootiga.
Waxaan maanta soo booqday waddankiina waayo waddankiina waxa uu sammeynaya isbedel, 3 sanno ka hor markii la meelmariyey dastuurka, Barlamankana la dhaariyey iyadoo taageero laga helayo Amisom, Ciidanka Qalabka sida ee Soomaaliya waxa ay ka saareen Ugus magaaloyinka ay dadka badani degan yihiin.
Dadaalka beesha caalamkana waxaa sidoo kale xal loo helay falalka burcad badeednimada ee Soomaaliya.
Amaantasi waxaa leh Shacabka Soomaaliyeed maxaa yeelay nolol cusub baa ku soo noqotay waddooyinka Muqdisho, Kismayo, Baydhaba iyo Garoowe iyo meele kale, waxaa furmay ganacsi cusub oo ay qayb weyn ku leeyihiin qurba joogta Soomaalida ee ku soo noqonaya oo maal-gashi dhaqaale ku sameynaya dalkooda, waxayna ka qayb qaadanayaan dib u dhiska dalka.
Dabcan waxaa muuqda in dalka noqonayo mid nabdoon oo barwaaqo ah, waxa aan maanta la sheekaystay hogaamiyeyaashiina waxana kala hadlay talaabada xigta ee ay tahay in loo qaado 2016-ka iyo in la mideeyo hurumarinta Soomaaliya.
Dawladda Federal-ka waxa ay ka shaqeeynaysaa dhismaha maamul gobaleedyo cusub si loo xoojiya xasiloonida loona gaarsiyo barwaaqo meel walba oo dalka kamid ah, taasi waxaa ku jira sida mas’uuliyadaha loo wadaagayo heer qaran, heer gobal illaa heer degmo waxana rajeynayaa in horumar wanaagsan la gaaro sida uga dhakhsiyaha badan.
In ciidanka gobalka lagu soo biiriyo kuwa dawlada Federalka si ay u noqdaan ciidan xooggan oo kuwa qalabka sida ee Soomaaliya ah.
Dawladda waxa ay sidoo kale ka shaqeynaysaa oo meel geba-gebo u maraya dastuurka iyo in ay qabato doorasho Dimoqradi ah sannadka 2016-ka.
Dhamaantiin waa inaad ku yeelataan cod hanaankan, hogaamiyeyaashiina waa ay xaqijiyeen in ay ka go’antahay hurumarinta arrimahan iyo dhamaan dhaba loo marayaba, waa guul.
Dunida kama fogaan karto dal qariidada ku jira oo aan haddan maamul ka jirin, xaqiiqda waxa ay tahay in soomaaliya ay leeyahay dawlada wax ku ool ah waan fursad taariikhi ah.
Dawlada Mareykanka doorkeeda ayey qaadaneysaa waxa ay dhisaneysaa dhismaha hawlaheeda diplomasi (Safaarad) weli wakhti go’an uma sameyn dhismaha safaaradda, waxan kor u qaadayna joogitaanka diplomasiyiinteenna halkan, waxaana soo magacawnay safaarkeenii uga horeeyey tan iyo intii aan albaabada isugu dhufanay bishii Janayo sannadkii 1991.
Soomaaliya iyo Mareykanka meel wanaagsan buu xiriirkooda marayaa waxaana rajeynayaa in aan arko dalkan oo mid ah,isuna keena gobollada, soo ceshada qaxootiga dibbada ka jooga, dunida meel fiican ka istaago
Dawlada mareykanka waxa ay u diyaar garowday wax walbo oo ay ku caawin karto Soomaaliya, amaan, barwaaqo iyo nabbadba waa ay istaahilaan.
Tarjumay: Maxamed Cusmaan “Black Cobra”
DEG DEG: John Kerry oo soo gabagabeeyey socdaalkiisii Muqdisho
Wasaaradda Caafimaadka oo 25 dhaawacyo howlo daaweyn ah ugu dirtay dalka Qatar. (Sawirro)